၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးအပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ်အစိုးရတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာ ၂၃နှစ်တာကာလ အတွင်းမှာ ၁၆ကြိမ်မြောက် ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ (၂) ကြိမ်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ (၁) ကြိမ်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ (၃) ကြိမ်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ (၃) ကြိမ်၊ […]
October 18, 2011 • By Network for Democracy and Development • Tags: Burmese, Daw Aung San Suu Kyi, National Reconciliation, Network for Democracy and Development • Read more ➤
This 99-page report written by longtime Burma watcher Bertil Lintner, describes the repression Burma’s monks experienced after they led demonstrations against the government in September 2007. The report tells the stories of individual monks who were arrested, beaten and detained. Two years after Buddhist monks marched down the street of the detained opposition leader Aung […]
September 22, 2009 • By Human Rights Watch • Tags: Buddhism, Human Rights Watch, Monks • Read more ➤